नायिका सुष्मा कार्कीको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् त ? Canada Nepal
नायिका सुष्मा कार्कीको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् त ?
काठमाडौं । नायिका सुष्मा कार्कीको आज जन्मदिन । १९८५ फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन उनको जन्म बर्दिया जिल्लामा भएको थियो । यस आधारमा आज उनी आफ्नो ३६औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् ।
सुष्माले ‘मेरो एउटा साथी छ’ चलचित्रबाट डेब्यु गरेकी हुन् । मोडलिङ्ग हुँदै चलचित्रमा लागेकी उनले दर्जनौं म्युजिक भिडियो र फेसन शोमा क्याटवाक गरेकी छन् ।
बिन्दास, बाउन्सर, लूटलगायत सुष्माले खेलेका यादगार चलचित्र हुन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुष्मालाई हक्की र निडर नायिकाको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । त्यही कारण उनी बेलाबेला विभिन्न कारणले विवादमा आइरहन्छिन् । एकपटक उनले ‘बार’ चलचित्रका निर्माताले आफूलाई यौन उत्पीडन गरेको आरोप लगाइकी थिइन् । तर निर्माता समूहले भने उनको यो आरोप अस्विकार गरेको थियो ।
उनलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गराएका थिए । दुवैबीच हार्दिक सम्बन्ध पनि थियो । तर, पछि दुवैबीच सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो ।
फाल्गुण २, २०७६ शुक्रवार ०७:२८:०० बजे : प्रकाशित